Nhau - Zvekutarisa mune yeGaming Monitor
Chii Chaunotarisa MuGaming Monitor
MaGamers, kunyanya akaomesesa, zvisikwa zvine hungwaru, kunyanya kana zvasvika pakutora tarisiro yakakwana yeiyo rig yemitambo. Saka chii chavanotarisa kana vachitenga kutenderera?
Saizi uye Kugadziriswa
Aya maviri maficha anoenda pamwe uye anowanzo kuve eanogara ari ekutanga anotariswa asati atenga yekutarisa. Screen hombe iri nani zvirinani kana iwe uchitaura nezve zvemitambo. Kana iyo imba ichibvumidza, sarudza iyo 27-incher yekupa yakawanda mizinda yezvivakwa ziso-rinobuda mifananidzo.
Asi hombe screen haizove yakanaka kana iine crappy resolution. Chinangwa cheinenge izere HD (yakakwira tsananguro) skrini ine 1920 x 1080 pixels resolution yakakura. Mamwe matsva 27-inch monitors anopa Wide Quad High Tsananguro (WQHD) kana 2560 x 1440 pixels. Kana mutambo wacho, uye mutambo wako wekutamba, uchitsigira WQHD, iwe ucharapwa kusvika kunyowani mifananidzo yakajeka kupfuura yakazara HD. Kana mari isiri nyaya, unogona kuenda Ultra High Tsananguro (UHD) ichipa 3840 x 2160 pixels egiraidhi kubwinya. Iwe unogona zvakare kusarudza pakati pescreen ine chiyero cheiyo 16: 9 uye imwe iine 21: 9.
Refresh Rate uye Kupindura kwePixel
Iyo yekuzorodza mwero ndeye kangani kangani iyo yekutora inotora kudhirowa iyo skrini mune yechipiri. Inoyerwa muHertz (Hz) uye nhamba dzakakwirira dzinoreva zvishoma zvishoma mifananidzo. Mazhinji monitors ekushandisa zvakajairwa akayerwa pa60Hz izvo zvakanaka kana iwe uchingoita hofisi zvinhu. Kubhejera kunoda kweinenge 120Hz yekukurumidza mhinduro mhinduro uye chinhu chinodiwa kana uchironga kutamba mitambo ye3D. Iwe unogona zvakare kusarudza monitors akashongedzerwa neG-Sync uye FreeSync iyo inopa kuwiriranisa nekatsigira giraidhi kadhi kubvumira kusiyanisa zororo remitero yeiyo kunyange inotapira ruzivo rwekutamba. G-Sync inoda iyo Nvidia-yakavakirwa mifananidzo kadhi nepo FreeSync ichitsigirwa ne AMD.
Iyo pikicha yekuona pikisheni ndiyo nguva iyo pixel inogona kuchinja kubva kune nhema kusvika chena kana kubva kune mumwe mumvuri we grey kuenda kune mumwe. Iyo inoyerwa mumamirisecond uye kudzika manhamba nekukurumidza ndiyo pikisheni yekupindura. Kupindura kwepikisi nekukurumidza kunobatsira kudzikisira mapikisheni emweya anokonzerwa nekukurumidza kufambisa mifananidzo inoratidzwa pane yekutarisa inotungamira kune inotsvedza pikicha. Mhinduro yakanaka yepikisheni yekutamba ndeye 2 milliseconds asi 4 milliseconds inofanirwa kunge yakanaka.
Panel Tekinoroji, Vhidhiyo Inopinza, uye Zvimwe
Mapenduru eNamatic kana TN mapaneru ndiwo anodhura uye ivo vanopa kukurumidza kuzorodza mitengo uye mhinduro yepikisheni ichivaita vakakwana pakutamba. Nekudaro ivo havape akakura ekuona angles. Vertical Alignment kana VA uye In-Plane switching (IPS) mapaneru anogona kupa akasiyana akatanhamara, akanakisa ruvara, uye akapamhamha ekuona angles asi anokanganiswa nemweya mifananidzo uye inofamba zvigadzirwa.
Monitoring ine akawanda mavhidhiyo ekuisa akakosha kana iwe uri kushandisa akawanda emitambo mafomati senge consoles nemaPC. Multiple HDMI madoko akanaka kana iwe uchida kushandura pakati peakawanda mavhidhiyo masosi senge imba yako yemitambo, yako koni koni, kana yako yemitambo rig. DisplayPort inowanikwawo kana yako yekutarisa ichitsigira G-Sync kana FreeSync.
Vamwe vatariri vane USB ports yekunanga kubhaisikopo kutamba pamwe nematauri ane subwoofer yeiyo yakazara yakazara mutambo wemitambo.
Ndeupi saizi komputa yekutarisa ndiyo yakanyanya kunaka?
Izvi zvakanyanya zvinoenderana nesarudzo iwe yauri kunongedza uye yakawanda sei nzvimbo yedhesiki yauinayo. Kunyangwe yakakura ichiita kunge inotaridzika zvirinani, ichikupa imwe nzvimbo yekuratidzira yebasa uye mifananidzo hombe yemitambo nemamuvhi, ivo vanogona kutambanudza resolution-yekupinda-chikamu senge 1080p kusvika kumiganhu yekujeka kwavo. Mahombe mahwindo anodawo imwe nzvimbo padhesiki rako, saka isu tinonyevera kutenga yakakura ultrawide senge JM34-WQHD100HZ mune edu zvigadzirwa zvinyorwa kana iwe uri kushanda kana kutamba padhesiki hombe.
Semutemo unokurumidza wechigumwe, 1080p inotaridzika kunge inosvika pamasendimita makumi maviri nemana, nepo 1440p ichitaridzika zvakanaka kusvika nekumashure makumi matatu. Hatidi kukurudzira 4K skrini chero diki pane 27 inches sezvo usiri kuzoona iwo chaiwo mabhenefiti eayo akawedzera mapikisheni mune iri nzvimbo diki nedare nesarudzo.
Ko vatariri ve4K vakanakira mutambo?
Vanogona kuva. 4K inopa panhongonya yemitambo yemitambo uye mumitambo yemuchadenga inogona kukupa iyo nyowani nyowani yekunyudza, kunyanya pazviratidziro zvakakura zvinogona kunyatsoratidza iwo huwandu hweaya mapikisheni mukubwinya kwavo kwese. Aya ekumusoro-res anoratidza kunyatsonaka mumitambo umo mafuremu mareti asina kukosha sekujeka kwekuona. Izvo zvakati, isu tinonzwa kuti yakakwira yekuvandudza mwero mamonitori anogona kuunza chiitiko chiri nani (kunyanya mumitambo inomhanya-mhanya sevapfuri), uye kunze kwekunge uine homwe dzakadzika dzekupaza pane yakasimba kadhi yemifananidzo kana maviri futi, iwe hausi kuenda kunotora iwo mafuremu mitengo pa4K. Iyo 27-inch, 1440p inoratidza ichiri nzvimbo inotapira.
Zvakare chengeta mupfungwa kuongorora mashandiro izvozvi zvinowanzo kuve zvakabatana neyakaomesesa manejimendi manejimendi senge FreeSync uye G-Sync, saka tarisa kune aya matekinoroji uye makadhi emifananidzo inoenderana paunenge uchiita zvemitambo yekutarisa sarudzo. FreeSync ndeye AMD kadhi yemifananidzo, nepo G-Sync inoshanda chete neNvidia's GPUs.
Ndezvipi zvirinani: LCD kana LED?
Mhinduro pfupi ndeyekuti ivo vaviri vakafanana. Mhinduro yakareba ndeyekuti uku kukundikana kwekushambadzira kwekambani mukuburitsa nemazvo izvo zvigadzirwa zvayo. Nhasi uno mamonitor akawanda anoshandisa tekinoroji yeLCD akadzoserwa nemaLED, saka kazhinji kana iwe uri kutenga yekutarisa zvese zviri zviviri LCD uye LED kuratidza. Kune zvimwe zvekutsanangurwa paLCD uye LED matekinoroji, isu tine yakazara gwara rakazvitsaurira kwariri.
Izvo zvakati, pane maOLED ekuratidzira ekufunga, kunyangwe aya mapaneru asina kuita chinokanganisa pamusika wedesktop parizvino. Masikirini eOLED anobatanidza ruvara uye mwenje mune rimwe jira, inozivikanwa nemavara ayo akasimba uye chiyero chekusiyanisa. Nepo iyo tekinoroji yanga ichigadzira mafungu mumaterevhizheni kwemakore mashoma ikozvino, ivo vari kungotanga kuita nhanho yekuyedza kupinda munyika ye desktop monitors.
Ndeupi mhando yekutarisa yakanakira maziso ako?
Kana iwe uchinetseka nekutambudzika kweziso, tsvaga monitors ayo akavaka-mukati yakajeka firita software, kunyanya mafirita ayo akagadzirirwa zvakanyanya kurerutsa matambudziko eziso. Aya mafirita akagadzirirwa kuvhara mwenje wakawanda webhuruu, inova chikamu chemitambo inobata maziso edu zvakanyanya uye inokonzeresa matambudziko mazhinji emeso. Nekudaro, iwe unogona zvakare kurodha eziso firita software maapuro eipi mhando yerudzi rwekutarisa iwe yaunowana